Ama-Documentary Ama-10 Ahle ku-Netflix Bonke Abesifazane Kufanele Babuke - Ukuzijabulisa
Ama-Documentary Ama-10 Ahle ku-Netflix Bonke Abesifazane Kufanele Babuke
Konke kufanele ukubukwa — futhi ucabange ngakho.
I-Randy Shropshire / Getty Izithombe
Kunamadokhumentari amaningi amahle ku-Netflix, kepha amanye okungcono kakhulu yilezo ezibonisa okwenzeka kwabesifazane kuzo zonke izinto eziyinkimbinkimbi. Kusuka ku- I-Audrie neDaisy, ukubukeka okubalulekile emiphumeleni yokuhlukunyezwa ngokocansi kwabesifazane ababili abasebasha, ukuze Kufunwa Amantombazane Ashisayo: Kuvuliwe, uchungechunge oluhlola okwenzeka kwabesifazane embonini yezocansi, iningi lalawa mafilimu azokwandisa umqondo wakho futhi avule umhlaba wakho. Abanye bazokwenza uzizwe ubonwa.
Noma yini oyithathayo kulawa ma-documentary amahle ayi-10 kuNetflix, amafilimu azokukhombisa izithombe zangempela ezinonya zomhlaba esiphila kuwo. Kufanelekile ukuwabuka — futhi ucabange ngawo.
Elinye lamafilimu amaningi aphenya imfihlakalo ezungeze ukufa kukaJonBenet Ramsey, leli livela ngokubuza imibuzo ebalulekile esibe nayo iminyaka: Kungani namanje uyazifela ngalokhu kubulala? Futhi ukuvezwa kwabezindaba kwaleli cala — noJonBenet uqobo – kudlala kanjani kulokho?
Kufunwa Amantombazane Ashisayo: Kuvuliwe
Kufunwa Amantombazane Ashisayo: Kuvuliwe ukulandelana kwezinhlobo ezithile kudokhumentari odunyiswe ngokujulile ka-2015 Kufunwa Amantombazane Ashisayo. Lolu chungechunge lweNetflix lubanga i-psyche, futhi: Kufanele ngabe siyayigxeka imboni yezocansi? Noma ukuzwelana nabesifazane abayingxenye yayo? Ngabe inika amandla noma iyaxhaphaza?
13 ayihloli ngokusobala izingqinamba zabesifazane, kepha iqondiswa ngu-Ava DuVernay futhi ibhekana nodaba okufanele sonke silukhathalele: ukwephula umthetho kwabantu abaningi abaMnyama okungekho emthethweni e-United States. Le dokhumentari ilungisa ngokucophelela i-psychology ngemuva kokuphathwa kabi kwamaphoyisa ngabantu bebala. Akuluhlaza, akuvuleki, futhi kufanele ubone.
Le documentary yango-2016 yeNetflix ihlola amacala okuhlukunyezwa ngokocansi kwabesifazane ababili abasebasha: U-Audrie Pott waseSaratoga, eCalifornia noDaisy Coleman waseMaryville, eMissouri. Bobabili babeneminyaka engaphansi kwengu-16 ubudala ngesikhathi behlaselwa, kanti izisulu kanye nemindeni yabo babhekana nokuhlukunyezwa nokuxhashazwa ngemuva kokuphumela obala ngokuhlaselwa. Lezi zindaba ezimbili ziyahlaba umxhwele, njengokuphawula kwefilimu mayelana 'nabafana kuzoba yisiko lokudlwengula labafana. Kubuhlungu kakhulu ngoba zombili lezi zihloko zefilimu zibulawe ngokuzibulala: U-Audrie, ngo-2012, noDaisy, ngo-2020.
Ukumelwa kuka-Miss ukubheka kuqonde ezindleleni eziyinkinga nezinciphisayo imithombo yezindaba eveza abesifazane besezikhundleni ezinamandla. Umlayezo wefilimu ka-2011 awumusha kakhulu noma awuqali — abesifazane bazi lokhu isikhathi eside njenga TV-kodwa lokho akukwenzi kuthakazelise (noma kudingekile) ukubukwa.
Le dokodo ngokuzijabulisa iphila ngokuvumelana nesihloko sayo: U-Chelsea Handler wenza, empeleni, konke okukulezi ziqephu-kusuka ekuthwebuleni izithombe ezishutha wedwa noKhloé Kardashian kuya ekuxoxeni ngekhanda lamarobhothi elisabekayo. Uma usesimweni sokubuka intokazi ehlekisa kakhulu yenza izinto ezihlekisa kakhulu, beka U-Chelsea Uyakwenza phezulu kolayini wakho.
Ubani owabulala uSister Cathy? Lowo ngumbuzo ophambili walolu chungechunge lweziqephu eziyisiqephu eziyisikhombisa ezivela kuNetflix mayelana nokubulawa okungakaxazululwa kukaCathy Cesnik, indela kanye nothisha wesikole samabanga aphezulu, eBaltimore, eMaryland. Iqembu labafundi bakhe bakudala likholwa ukuthi umpristi owatholwa enecala lokunukubeza abafundi ngokocansi uyena onecala — kanti ukufuna kwabo ubulungiswa kuyizinto ezilinganayo ezibuhlungu nezikhuthazayo.
Kwenzekeni, Miss Simone?
Iqondiswe nguLiz Garbus futhi waphakanyiselwa i-Best Documentary Feature kuma-2016 Academy Awards, Kwenzekeni, Miss Simone? ungene empilweni ethokozisayo nomsebenzi womculi uNina Simone. I-New York Times kuchaziwe ifilimu njengedokhumentari kagesi, ephuthumayo ekubukezweni kwayo, futhi asivumelananga okuningi.
Ukubuya ekhaya kungaphezu kokubukeka kwangaphakathi kokusebenza kwesithonjana sikaBeyoncé 2018 Coachella: Kuyindlela yokusebenza kanzima nokuthi ungasenza kanjani isitatimende. Idokhumentari enika amandla ikhombisa iBeyhive — kanye nanoma yibaphi abagxeki okungenzeka ukuthi babukele — ukuthi mingakanani imizamo, ukuhlela, nokucabanga okuhambe kulokhu kusebenza kwempilo yonke. Lokhu kumele kubukwe.
Le dokhumentari evuselelayo ilandela imikhankaso eyinhloko ka-2018 yabesifazane abane abathuthukayo abaqhuba imikhankaso emincane yokulwa nalabo abasezikhundleni zesikhathi eside: u-Alexandria Ocasio-Cortez, u-Amy Vilela, uCori Bush noPaula Jean Swearengin. UMqondisi uRachel Lears namakhamera akhe alandela umkhondo womkhankaso njengoba laba besifazane abakhuthazayo belwela ukuguqula umlando ngokoqobo.
ingakanani i-pillowcase yenjabulo
emibonweni yosuku lwe-spa yasekhaya